We She Me: အဖြူအမည်း သီအိုရီ
pandora - 8/31/07, 2:55 AM
ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ ဘလော့ဂ်ရေးတာကို motivate လုပ်ချင်လို့ comment လာရေးလိုက်ပါတယ်။ အဟဲ။
အောက်ကရေရင် တတိယပိုဒ်ရဲ့ ဒုတိယ အကြောင်းအရာကို motivate လုပ်ပုံလေး နည်းနည်း အသေးစိတ်ပြောနိုင်မလား။ ဟီးး။
အဲ.. ဒါတွေက အနောက်ပါ.. အတည်က အောက်မှာ....
မြန်မာပြည်က အမျိုးတွေ အတွက်တော့ .. အင်း.. ဒါကတော့ ပြဿနာမသေးဘူးဗျ. ပညာရှင်တွေတောင် ခေါင်းချင်းရိုက်နေကြတာ..။
auschwitz ကြီးပဲ သွားသွားမြင်တယ်။ အဲဒီအကြောင်း ကိုပု ဘလော့မှာလည်း ကွန်မန့်တစ်ခါ သွားရေးဖူးတယ်။ လက်နက်မဲ့လူများစုကြီးက လက်နက်ကိုင်လူနည်းစု ကိုခံချ ထွက်ပြေးဖို့ စိတ်မရှိတာ။ သိပ်မဆိုးလောက်ပါဘူး မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ရိုရိုကျိုးကျိုး လိုက်လာတာ။ လူတွေဟာ အကြောက်တရားနဲ့ အချိုးခံလိုက်ရရင် တော်တော် အညွန့်တုံးတာပဲ။ စိတ်တွေကို စနစ်တကျ ချေမှုန်းခံရတော့ တော်တော်နဲ့ နာလန်မထူနိုင်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးမသိတော့ဘူး။ ကိုယ့်အနာဂတ်ကိုယ် မမြင်နိုင်တော့ဘူး။ စစ်မရောက်ခင် မြားကုန်ပြီ။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ ဘယ်လို incentive တွေ ပေးပြီး motivate လုပ်ကြမလဲ ဆိုတာ လွယ်တဲ့ ပုစ္ဆာတော့မဟုတ်ဘူး။ incentive ကို အယုံအကြည် မရှိတာတောင် ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဲဒါကတော့ ဂွပဲ။ ပိုဆိုးတယ်။
နောက်တစ်နည်း လုပ်လို့ရနိုင်တာကတော့ ဒီအတိုင်းနေရင် ငရဲအိုးထဲ ကျဖို့ပဲ ရှိတော့တယ် ဆိုတဲ့ အသိမျိုးဝင်လာရင်တော့ ကြောက်ပြီး လှုပ်လာနိုင်တယ်။ အင်း... ဒါကြောင့်လည်း smart ဖြစ်တဲ့ အုပ်ချုပ်သူမျိုးကတော့ ပြည်သူပြည်သားတွေကို မရှိမရှားလေး ဖြစ်အောင် စီမံပေးထားတတ်တယ်။ သူများ အမြင်လည်း ကြည့်ကောင်းတာပေါ့။
အင်း ပြောမယ့်ပြောတာ ကိုယ်တိုင်လည်း ကြောက်တတ်လို့ ကိုယ့်ဘလောဂ့် မှာတော့ ဒါမျိုးတွေမရေး သူများဘလော့ဂ်မှာပဲ ဒါမျိုးလေး ကြုံရင် ကွန်မန့်တွေ လေကြီးမိုးကြီး လိုက်လိုက်ချတာ.. ဟဲ။....... အဲ..ဒီလို မထင်ပါနဲ့..လို့။
ဂျစ်တူး - gyit_tu - 9/1/07, 12:05 AM
ခြောက်ပြီး motivate လုပ်နည်းက backfire ဖြစ်တတ်တယ် ။ လူတယောက်ဟာ.. အခြောက်ခံရတာ များလွန်းရင် ၊ မခံနိုင်တော့ပဲ ထုံသွားတတ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ် ။
Anonymous - 9/1/07, 11:33 AM
talk about NCC in KMD. which batch were u in? class of 95? evening? i was in that class too :)
Andy Myint - 9/2/07, 8:23 PM
တားတား နိုင်နံရေး အတိဝူး.. တားတား ရေးတာ မိုတီဘေးချင်း...
လင်ယားချင်း ဘယ်လို မိုတီဘိတ်လုပ်ရဲ တိချင် ၀ယ်ဖတ်...
မျက်ချိကန်းလည်း တစ္စေ မကြောာာက်ပါဝူးးးး
Nuh... I'm from Class of 98
Layma - 9/5/07, 12:49 AM
motivate လုပ်ချင်လွန်းလို့ဝင်ရေးသွားပါတယ်…ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လို motivate လုပ်ရမလဲ…။
Andy Myint - 9/5/07, 12:09 PM
မပန်ဒိုရာတို့၊ မဂျစ်တူးတို့ ဆီမှာ စစ်ကူ တောင်းထားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း စဉ်းစားလို့ ရရင် ရေးလိုက်မယ်။
ဂျစ်တူး - gyit_tu - 9/6/07, 3:29 AM
ဂျစ်တူး၏ ကိုယ့်ဘာသာ မိုတီဗိတ် လုပ်နည်းများ ..
(၁) ကိုယ့်ဘာသာ ရက်အနည်းငယ် ပေတေပစ်လိုက်တယ် (လုပ်သင့်တာမလုပ် လုပ်ချင်တာပဲ လုပ်တာမျိုး) ။ အများဆုံး ၁ပတ် ။ အဲဒီအတွင်း ကိုယ့်ဘာသာ စိတ်တွေကို အေး၂ဆေး၂ စမ်းစစ်တယ် ။ ပေတေခွင့်ပေးလိုက်တဲ့တွက် ပြန် အလုပ်လုပ်ရမယ်လို့ ဆုံးမတယ် ။
(၂) ကိုယ့်ထက် ဘ၀ကံမကောင်းသူတွေကို စဉ်းစားတယ် ။ သူတို့တောင် ဘ၀မှာ နေနိုင်သေးရင် ၊ ငါက ဘာလို့ အဲလောက် ဖြစ်နေရလဲလို့ ကိုယ့်ဘာသာ အပြစ်တင်တယ် ။
(၃) ဘ၀မှာ နင်ဘာလုပ်ချင်တာဘာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကိုယ့်ဘာသာ အခါပေါင်းများစွာ မေးတယ် ။
(၄) ၀ိုင်သောက်တယ် ဟဲဟဲ..
(၅) ရှော့ပင်းသွားတယ် .. အဟီး..
All written in order of importance :)
Andy Myint - 9/9/07, 1:12 PM
ကျွန်တော့်ကိုယ် ကျွန်တော်တော့ Motivate လုပ်ခဲပါတယ်။ Ambitious လည်းမဖြစ် Serious လည်းမဖြစ်လို့ပါ။ များသောအားဖြင့်တော့ သူများတွေ ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ.. ကိုယ်ကတော့ ဘယ်လောက် ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပဲ Motivate လုပ်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ မိသားစုအတွက် လုပ်နေတာပဲ ဆိုပြီး Motivate လုပ်ပါတယ်။ အလုပ်မှာ လုပ်ရတာ ပင်ပန်းတဲ့ နေတွေဆိုရင် အိမ်ပြန်ရောက်ရင် ဘာလုပ်မယ်၊ ညာလုပ်မယ် တွေးပြီး Motivate လုပ်ပါတယ်။ ဂျစ်တူးပြောသလို ဆိုရင်တော့ ... အဟဲ ... ကျွန်တော်လည်း တစ်ခါတစ်လေ Whisky ကို On the Rocks သောက်ပြီး အားဖြည့်ပါတယ်။
Layma - 9/11/07, 11:13 PM
မဂျစ်နဲ့တုန်၂တို့ အဖေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်...ဖတ်ပြီးလို့ဝိုင်သောက်လိုက်တာတော့ကြာပါပြီ...ဒီနေ့ မှကျေးဇူးစကားဆိုမိတာပါ...